PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - I-NEC ayisukume ilungise isimo eKZN
I-NEC ayisukume ilungise isimo eKZN
ISINQUMO seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ecaleni ebelifakwe ngamalunga e-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal emangalela ubuholi baleli qembu kulesi sifundazwe, senza sibuke ukuntenga kobuholi obuphezulu baleli qembu. Ingqungquthela eqoke ubuholi bukaMnu Sihle Zikalala, ohlule uMnu Senzo Mchunu kwesikasihlalo we-ANC KwaZulu-Natal - ebimhla ziyisi-5-8 kuLwezi (November) wezi2015 - ibingeke ihlale ngaphandle kwezibusiso zesigungu esiphezulu saleli qembu.
Sibona kuyisona esibonde isijabane sasishiya nephini phakathi. Kukusona-ke isigungu esiphezulu se-ANC ukulungisa lolu daba ukuze kube nokuthula KwaZulu-Natal njengoba amalunga e-ANC evele eqothwa eMzimkhulu, eningizimu yeKwaZulu-Natal nakwezinye izindawo - kusolwa ozakwabo kulokhu kufa kwawo. Sikhuluma nje, ngoMgqibelo kufihlwa uMnu Sindiso Magaqa obeyikhansela le-ANC eMzimkhulu, odutshulwe ehamba namanye amakhansela.
Uma ubuholi obuphezulu baleli qembu bungawashaneli la mabibi agcwele exhibeni lalo, kuningi okusazokonakala.
IKwaZulu-Natal isabhibha namanje ngenxa yodlame lwezepolitiki oludlule nemiphefumulo eminingi ngakho-ke siyanxusa ukuba noma ngabe yini eyenziwayo emuva kwalesi sinqumo, abantu mabalandele imigomo yeqembu njengoba behlale besho.
Siyanxusa ukuba ingabikhona eyokujikijelana ngamazwi njengoba izolo ngoLwesithathu abaholi abanjengoMnu Kwazi Mshengu, ohola i-ANC Youth League (ANCYL), bese bekhomba abanye abaholi baleli qembu ngenjumbane.
Lokho kungasusa udungunyane. Njengoba-ke ubuholi bukaMnu Zikalala, obulahlwe yicala buthi buzolidlulisa, kungaba kuhle ukuba lokho kwenziwe ngokuthula, abantu bangacabangi obhazabhaza bezimoto abahamba ngazo ukuthi bazobuyela emagaraji uma kwenzeka kuthiwa mabehle ezikhundleni bese besebenzisa izindlela zobumnyama ukuzama ukutibila ngoba lokho kungadala udlame olungabuyisela lesi sifundazwe emuva.
Kuyimanje i-ANC igubha iminyaka eli-100 kaMnu Oliver Reginald Tambo kodwa indlela izinto ezenzeka ngayo kuleli qembu yenza sibone ukuthi lo mholi nabanye okubalwa kubona uDkt Pixley Ka-Isaka Seme, uMnu John Langalibalele Dube, uMnu Nelson Mandela, uMnu Saul Msane bayaphenduka emathuneni. Sibona kuyifanele i-ANC ukuba ike ishone emashalofini ayo ithungathe inkulumo yeNkosi Albert Luthuli esihloko sithi, “Our Vision is a Democratic Society” ayethula engqungqutheleni yeSouth African Congress of Democrats ngowe-1958 eGoli, igxilise amehlo nemiqondo ngasekugcineni lapho kuthiwa “Sivame ukuthi konke esikwenzayo sikwenzela isizukulwane esizayo. Yinkulumo eyingozi leyo ngoba isizukulwane esizayo siyocabanga ngendlela eyehlukile kuneyethu, singase sinqwamane nesizukulwane esizayo siphimisela amathuna ethu…”
Uma ngabe abaholi baleli qembu bezoqhubeka benze izinto ezingase zidale udungunyane kuleli lizwe, babe nezinkulumo ezivubela ukungezwani, sibona ukuthi kuzokwenzeka njengoba kwasho iNkosi Luthuli - isizukulwane esizayo siyophimisela amathuna abo. Kakudokwe eligayelwe thina ukuthi ngubani ophethe kwi-ANC kodwa okusikhathazayo wukuthi njengoba leli qembu kuyilona eliphethe uhulumeni kuzwelonke, KwaZuluNatal nenqwaba yomasipala, iqiniso nje wukuthi ukudunguzela kwalo kuchaphazela zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika.
Indlela abaholi baleli qembu abenza ngayo manje yenza sibe novalo lokuthi bazoliqhekeza life nya, okungathi uma kwenzeka ngowezi-2019 libhincela nxanye okhethweni, kusuke esinamathambo ngoba kuyacaca ukuthi izikhundla lezi zinoju.
“Bangacabangi obhazabhaza bezimoto zabo ukuthi bazobuyela emagaraji uma kwenzeka kuthiwa mabehle ezikhundleni bese besebenzisa izindlela zobumnyama.